मरुभूमि विरुद्ध सहारा को महान हरियो पर्खाल | नेटवर्क मौसम विज्ञान
क्लौडी क्यासलहरू | | मौसम परिवर्तन, मौसम विज्ञान
हरियो पर्खाल यात्रा
अझै चलिरहेको छ, र जसको विकास एक दशक पहिले शुरू भयो, यो परियोजना ११ देशहरू पार गर्छ यो महान अफ्रिकी क्षेत्रमा मरुभूमिको प्रगति रोक्नको उद्देश्यले जन्मिएको हो। यो अफ्रीकाको महान हरित पर्खाल को रूपमा चिनिन्छ, वा सहारा र सहेल को महान हरित पर्खाल को लागी पहल। तपाईंको लक्ष्य धेरै सरल छ, तर विशाल। 7.000,००० मिलियन संग वित्त लगभग यूरो, यस पर्खाल को कभर गर्न को लक्ष्य ,8.000,००० किलोमिटर लामो र १ wide चौंडाई। एक विचार प्राप्त गर्न, कुल १२०,००० वर्ग किलोमिटर। स्पेन को आकार को एक चौथाई को बराबर!
यसको पनि दोहोरो इरादा छ। एकातिर त्यो मरुभूमिलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्नुहोस्, र अर्कोमा मौसम परिवर्तनको प्रभाव लाई कम गर्नुहोस्। लाखौं रूख रोप्ने धेरै फाइदाहरू छन्, र बबूल रूखको रूपमा रोजिएको कुनै दुर्घटना होइन। उनीहरूले खडेरीसँग प्रतिरोध गर्छन् र उनीहरूको छायाले बढ्दो क्षेत्रहरूमा पानी बचाउन मद्दत गर्दछ। यसका फाइदाहरूमध्ये धेरै यो छ कि खानेकुराको अभावका कारण धेरै व्यक्तिहरूले यी क्षेत्रहरू छोड्नुपर्दछ।
1 हरियो करिडोर, लगभग शताब्दी पुरानो विचार
2 के यो इच्छुकमा ईकोसिस्टम परिमार्जन गर्न सही छ?
3 के अन्य विकल्पहरू विचार गर्न सकिन्छ?
हरियो करिडोर, लगभग शताब्दी पुरानो विचार
नयाँ भए पनि, यो विचार १ 1927 २। को हो। फ्रान्सेली वन अभियंता लुइस लाभाउदेनले "मरुभूमि" भन्ने शब्द प्रयोग गरे। कृषि शोषण र शुष्क भूमिहरूको ह्रासको परिणामस्वरूप मरुभूमि अग्रिम छ भनेर वर्णन गर्न। २ 25 बर्ष पछि, १ 1952 XNUMX२ मा सहारामा जीवनयापन सुधार गर्ने धारणा हराएन। अर्को वानिकी अभियंता, अंग्रेज रिचार्ड सेन्ट बेबर बेकरले एक ठूलो पर्खाल निर्माण गर्ने विचार सुझाव गरे k० किलोमिटर र मरुभूमिको प्रसारलाई समावेश गर्न रूखहरूको "हरियो अवरोध" सिर्जना गर्नुहोस्।
हर्न अफ अफ्रिका र hel० को दशकमा सहेलमा भएको खडेरीले यी सबै परिस्थितिहरूलाई कम गर्न विचारको शुरुआत गरे। यो सम्म थिएन २००,, जहाँ अफ्रिकी संघले यो परियोजना स्वीकृत गर्‍यो यसले सेनेगलदेखि जिबूती सम्म सम्पूर्ण महादेश पार गर्‍यो। एक महत्वाकांक्षी परियोजना जुन अझै महत्वाकांक्षी र चलिरहेको छ, त्यहाँ तिनीहरू छन् जसले भन्छन् कि त्यसले थोरै प्रयास गर्न सक्दछु।
के यो इच्छुकमा ईकोसिस्टम परिमार्जन गर्न सही छ?
यो सायद त्यो अंश हो जहाँ धेरै पटकहरू, यो यस्तो देखिन्छ हाम्रो कार्यले प्राकृतिक रूपमा सिर्जना गरिएको कुनै चीजलाई कडा प्रभाव पार्न सक्छ। लुइस लाभाउदेनले यसलाई "मरुभूमि" भन्नु उचित भएको हुन सक्छ तर अब हामीलाई यो पनि थाहा छ कि मौसम परिवर्तन गर्न सकिन्छ। आलोचनाहरू फेरि प्रस्तुत गरियो। "डिटेक्टरहरू" तर्क गर्छन् कि, मौसमबाट प्रभावित स्वस्थ र प्राकृतिक इकोसिस्टम, एक प्रकारको प्राकृतिक रोगको रूपमा लिन सकिदैन.
अर्को विवाद खडा हुन्छ कि यदि यसको अर्थ वास्तवमा त्यहाँको जनसंख्याको जीवन अवस्थामा सुधार हुनुपर्दछ भने यो सामान्य "सामान्य" हुँदैन। त्यो हो, समस्या समात्नुको सट्टा, ध्यान केन्द्रित गर्नु भनेको के हो परिधि बनाउनु हो। अर्को तर्फ पनि ठुलो क्षेत्रहरू कब्जा गर्न यो उचित हुन्छ, र त्यस्तो लामो साँघुरो रेखा होइन। अन्तिम विचार थपेको हुनुपर्दछ कि यो सम्पूर्ण सहारालाई घेरेको थियो, जसले विद्यमान हरियो क्षेत्रहरूको साथमा हरियो "पर्खाल" लाई केही अस्पष्ट बनाउँदछ।
के अन्य विकल्पहरू विचार गर्न सकिन्छ?
टेबलमा त्यहाँ सधैं समान समस्या आउने बिभिन्न तरिकाहरू छन्। यी मध्ये एक विकल्प पृथ्वीबाट आफैंले नयाँ उत्पन्न गर्न सक्ने क्षमतामा आधारित एक प्राविधिक हो। यो रूपमा चिनिन्छ पारिस्थितिक मेमोरी वा प्राकृतिक पुनर्जनन किसानहरू द्वारा प्रबंधित। बाढी र जनावरहरूले बीउहरू ठाउँहरूमा पुग्न सक्छन् जहाँ तिनीहरू पलाउन सक्छन्। पुरानो रूखहरूको जरा प्रणालीले नयाँ कोटहरू पनि उत्पादन गर्न सक्दछ। यो एक तरिका हुनेछ अधिक प्राकृतिक तरिकामा र बिरूवा को आवश्यकता बिना परिदृश्य बहाल रूखहरू सिधा।
अफ्रिकासँग विकल्पहरू, सम्भाव्य छन्, तर यसको शोषण र मौसम परिवर्तनले दृढ रूपमा चिन्ह लगाएको छ। हरियो भित्ता बाधा हो, एक ब्रेक जहाँबाट तपाईं अगाडि पछाडि जान सक्नुहुन्न। यद्यपि यो हासिल गरियो, आशा छ अन्तमा, यसले पूर्ण विरामको रूपमा काम गर्दछ। जहाँ नयाँ कथा लेख्न को लागी, जीवन र शुष्क भूमि बिना पूर्ण।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मरुभूमि विरूद्ध सहारा को महान हरियो पर्खाल
बोनमा नयाँ जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजना गरिनेछ